TURKEY Vs ITALY Euro 2021 Amụma, Nsogbu na ịkụ nzọ Atụmatụ - latabernasanlucar.com
By Sara GrayJune 8, 2021No Comments
Turkey ga-ezute Italytali na Stadio Olimpico na Rome. Egwuregwu a ga-anabata egwuregwu niile nke Italytali n’oge Euro 2021 ma kwalite egwuregwu egwuregwu nkeji iri na ise na July 3.
Anyị ga-enye gị nyocha na Turkey t Italytali maka mmeghe mmeghe nke Euro 2021 ma anyị ga-etinye nsogbu maka egwuregwu a t amụma anyị maka nsonaazụ yana usoro ndị e burun’amụma.
Formdị Italy, usoro nwere ike na Usoro
Italy bụ otun’ime ndị egwuregwu kachasị aga nke ọma na Europe meriri iko FIFA ụwa oge 4. Mgbe Brazil gasịrị, ha na Germany jikọtara ha ọnụ na ọnụ ọgụgụ nke aha iko ụwa.
Mgbe Brazil na Germany gasịrị, ha bụ ndị otu nke atọ ịbanyen’ọtụtụ ọnụ ọgụgụ asọmpi iko mba ụwa FIFA.
Weretali na-agbasi mgba ruo 2018 mgbe ha na-erughị eru maka 2018 FIFA World Cup maka oge mbụ kemgbe 1958.
Mana kamgbe Mancini ghọrọ onye isi na 2018 Italy nọn’ọnọdụ dị mma. Hastali enweela mmeri t 5 ọ bụla na 2021 miniature ruo eru maka Njikọ Njikọ nke UEFA Nation Nation na-enweghị otu egwuregwu.
Ha enyebeghị otu goolu n’ime egwuregwu asatọ gara aga. A katọrọ Italytali mgbe niile maka ịbụ ndị otu na-agbachitere ma ha agbatala ihe mgbaru ọsọ 3.13 na egwuregwu 8 ikpeazụ ha.
Tali nọ ugbu a t 7th website FIFA.
Kedu ka Italytali si kwụn’ahịrị? )
Hastali anọwo na-akwụ ụgwọ na usoro 4-3-3 ọ bụ ezie na oge ụfọdụ Mancini nwere ike ịgbanwe ihe na usoro 3-5-2.
N’okpuru Mancini playstali na-egwu egwuregwu mara mma nke bọọlụ nke 1 ma ọ bụ two na-achịkwa ndị etiti. Likestali nwere mmasị igwu egwu website t azụ. Ha na-adọtakarị ndị otu ndị ọzọ d e ọkara ha miniature mee ngwa ngwa gafere otun’ime ndị etiti ha bụ ndị nwere ikike ịgafe ogologo oge dịka Jorginho, Locatelli ma ọ bụ Marco Verratti.
N’oge na-adịbeghị anya, Italytali ahọrọwo igwu egwu Locatelli, Jorginho na Nicolo Barrella bụ ndị nyere aka na-enyere Inter Milan aka karịa Verratti bụ onye ya na PSG nwere mgbasa ozi ọma.
Otun’ime azụ zuru ezu na-agan’ihu ka onye nke ọzọ na-achọ ịlaghachi ma mepụta azụ atọ yana nke abụọ etiti azụ.
Nke a na-awakpo azụ na-abụkarị azụ azụ mgbe onye ziri ezi na-eche d e ọ ga-anọ obosara ma mechaa been’ime.
You nwere ike ịtụ anya na Leonardo Spinazzola ga-abụ ọgụ a zuru oke t nchebe ekpe yana Alessandro Florenzi ka ọ bụrụ onye na-agbachitere nchebe ọ gwụla ma Mancini kpebiri iji usoro 3-5-2 gbaa ọsọ.
Otu n’ime ndị etiti atọ ahụ, nke na-abụkarị nke dị n’aka nri, na-akwado ịkwalite mmegide ahụ. Nwa ama nwoke that a na-abụkarị Barrella mana Locatelli makwaara na ọ bụ iyi egwu karịsịa mgbe istali na-ebuli elu.
N’ịgan’ihu ndị na-awakpo anyị, retali na-adabere na ndị na-awakpo ngwa ngwa ma dị ike nke nwere ike ịgbanye ngwa ngwa na ọgụ.
Ọ na-abụkarị Barella ma ọ bụ Chiesa na-amaliten’aka nri nke bụ ebe Italytali na-ahọrọ ịwakpo. Ciro Immobile na-abụkarị etiti na-agan’ihu ma ọ bụ un kacha nwee ahụmịhe ọkpụkpọ nke na-arụsi ọrụ ike iji gbagoo na ịgbada ọdụ ahụ ma jikọta ya na ndị ọzọ na-awakpo ya.
Bellotti na-ese onyinyo immobile ma na-enyere aka ịkpụzi ndị na-eto eto dị ka Barella na Chiesa. Ọ bụrụ na enwere otu ọkpụkpọ ịchọrọ ịtinye iji jide ihe mgbaru ọsọ, ịkwesịrị ịkụ nzọ na Immobile!
Lorenzo Insigne na-amalitekarịn’aka ekpe.
Donnaruma ewerewo ihe ịtụnanyan’aka Buffon a ma ama ma ewere un dịka otun’ime ndị kacha eche nchen’uwa. Alsotali nwekwara Salvatore Sirigu dị ka ndabere ma ọ bụrụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi nke ọma, onye nwere nkà na ahụmịhe.
Ptali bu amụma banyere ahịrị
4-2-3-1 Donnaruma, Spinazzola, Bonucci, Chiellini, Florenzi, Locatelli, Jorginho, Barella, Insigne, Immobile, Barella
Ọ bụ ezie na ọ nwere ahụmahụ ma bụrụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi, ma Center nke Italytali nke azụ bụ agadi. Onyeisi Chiellini ga-atụgharị afọ iri atọ na asaan’afọ a ebe onye ọlụlụ un bụ Bonucci dị afọ iri atọ na anọ.
Abụọ ndị that a na-azụ azụ ga-adabere na ahụmịhe han’ịgụ egwuregwu ahụ d e igbochi ọgụ ndị a na-awakpo ndị na-agba ọsọ ọsọ. Locatelli na Jorginho ga-adabere t Jorginho bụ otun’ime ndị na-agbachitere bọọlụ kachasị mman’ụwa ma nwee ike igbochi adịghị ike a t otu ahụ website Id ijigide nchebe.
Formdị Turkey, usoro nwere ike na usoro
Turkey egosipụtara naanị iko ụwa abụọ na nke ikpeazụ ha pụtaran’iko ụwa bụn’afọ 2002 ebe ha mechara 3.
A kpụrụ ha na otu otu na asọmpi Euro gara aga na 2016, adabaghị tozuru oke nke Euro 2012 mana ha mechara nke atọ na Euro 2008.
Ma ekwela ka akụkọ ihe mere eme ha megharịa gị anya. Turkey enwebeghị mmeri n’egwuregwu isii ha gwuru ugbua n’afọ 2021 ma ha jisiri ike merie Netherlands 4-2 n’egwuregwu ha na-ahụ maka asọmpi iko mba ụwa bụ ndị kachasị mma.
Turkey nọ ugbu a t 27th na ọkwa FIFA.
Onye njikwa Turkey bụ Senol Gunez bụ onye zụrụ ha na mbụn’etiti 2000 ruo 2004 miniature duzie ha nke ọma d e njedebe nke 3 d e 2002 World Cup.
Kedu ka Turkey si kwụn’ahịrị? )
Turkey na-ahọrọ igwu egwu bọọlụ na-emegide ọgụ ma na-agbachitere agbachitere. Ha na-agbadata n’ahịrị 4-1-4-1 mana ha nwekwara ike ị kwụ n’ahịrị 4-4-2. Turkey na-eche na ọ ga na-agbachi ma na-egwu miri emi megide mmegide siri ike ma na-eche ka ọ wụsa ohere iji ngwa ngwa merie ọgụ ma jiri ohere.
Onye na-agbachitere onye na-agbachitere ha bụ Alright Yokuşlu na-echebekarị ha.
Mgbe Turkey nọ na ya, ha na-egwuri egwu websiten’azụ dị ka andtali ma gbalịa ịme ka akara akara na-agbaji bọọlụ ogologo. Onye egwu ha bu Burak Yılmaz bụ onye nyere goolu iri na isii n’ime goolu iri abụọ na asatọ nke Lille ma nyere ha aka merie Liegue 1 na France.
Nke ahụ dị ịtụnanya ịtụnanya d e Yilmaz ga-afọ iri atọ d e isiin’afọ a.
Yilmaz na-akwado ndị na-eto eto na ndị na-agba ọsọ ọsọ dị ka Kenan Karaman onye na-egwuri egwu dị ka onye ọkpụkpọ nke abụọ ma ọ bụrụ na Turkey Line na 4-4-2 ma ọ bụ maliten’aka nri ma ọ bụrụ na ha kwụ na 4-1-4-1.
Hakan Çalhanoğlu bụ onye ọzọ nwere ikike na-awakpo un mgbe niile na-amalite maka Turkey. Ọ bụ ezie na ọ bụ onye ọkpọ ọkpọ na-awakpo ya, ọ na-amalitekarị dị ka onye na-awakpo yan’akụkụ aka ekpe nke na-esikarịn’aka ekpe miniature mepụta ezigbo onye agha na-egbu egbu na Karaman na Yilmaz.
Ndị mwakpo atọ that a dị aghụghọ ma na mmegharị ha ma jikọọ egwu bụ ihe a na-atụghị anya ya maka ọtụtụ ndị na-agbachitere ya.
Onye ọkpụkpọ ọzọ ị ga-ele anya bụ Yusuf Yazıcı dị afọ iri abụọ na anọ. Ọ na – agbanwe ọnọdụ un t hanalhanoğlu nke na – eju ndị na – agbachitere un anya.
Ozan Tufan bụ igbe ha na-agbachitere onye ọkpọ ọkpọ nke maliteren’ihu Alright Yokuşlu ma nye nkwụsi ike maka ndị mwakpo Turkey ka ọ gbasaa.
Isi azụ azụ Turkey bụ Çağlar Söyüncü bụ onye ya na Juventus Center na-azụ Merih Demiral, Karan Ayahan ma ọ bụ Ozan Kabak na-arụkọ ọrụ.
Ndị na-agbachitere Turkey bụ nwata ma na-egwuri egwu maka klọb ndị isi na Europe.
Zeki Celik bụ aka nri ha ma ọ na-abụkarị onye na-awakpo azụ zuru oke mgbe Umut Meras bụ azụ aka ekpe ahọrọ. Celik dị afọ iri abụọ na anọ ebe Mera dị afọ iri abụọ na isii.
Turkey Eburu amụma akara
4-1-4-1 Mert Günok (GK), Celik, Kabak, Soyuncu, Meras, Yokuslu, Çalhanoğlu, Tufan, Yazıcı, Karaman, Yilmaz
Adịghị ike Turkey
Turkey nwere otu ndị na-eto eto ma na-agbasi ike ma ndị na-agbachitere ha erubeghị isi. Enwere ike ịmehie ihe ma ndị na-agbachitere ga-adabere na ahụmịhe nke onye na-agbachitere onye na-agbachitere ha bụ Yokuşlu.
Ọ bụ ezie na kọmpat na-agbachitere, Turkey na-enwekarị nsogbu website t ìgwè ndị nwere ike ịwakpo website Id mpaghara sara mbara ma gbatịa agbachitere ahụ.
Turkey Vs Ptali amụma
Nke a ga-abụ ihe na-akpali egwuregwu elu. Echiche ụgha na istali bụ otu nchebe ga-anwale ma n’echiche anyị, ọ ga-ezu ike. Asọmpi a ga-abụ ohere Italytali igosi ndị ọkammụta kwenyere na mwakpo istali adịghị mma iji merie European Championship.
Ndị na-eto eto na ndị okike nke ndị Turkey nwere ike iwepụ ndị nwere ahụmahụ karị ma nwee nwayọ nwayọn’etiti ndị Italy mgbe ndị agha Italytali na-arụsi ọrụ ike bụ ndị a maara maka ikike ha nwere ịpị elu elu, na-akpagbu ndị na-agbachitere ma na-eweghachi ihe onwunwe nwere ike ibute ọtụtụ ebumnuche na-aga Italytali. .
Anyị na-atụ anya na totali ga-emeri 2-0n’ọgụ siri ike na-alụso ọgụ megide ihe nchebe Turkish.
Turkey Vs Italy Nsogbu
Dabere na nsogbu ahụ, o doro anya na Italytali bụ ọkacha mmasị kachasịn’etiti ndị na-ede akwụkwọ na-enwe nsogbun’etiti 1.5 ruo 1.6 (-200 ka -167).
Ndị na-ere akwụkwọ na-enye nsogbu nke 6.8 ruo 7.5 maka Turkey (+580 ruo +650). Nke a yiri ka ọ na-egosi na ndị na-ede akwụkwọ na-ekwenyesi ike na Italytali ga-eji nkasi obi merie egwuregwu ahụ.
Turkey vs Italy Odds dị ka Oddschecker si kwuo
Turkey na Eurotali Euro Euro 2021 Atụmatụ ịkụ nzọ
Ọ bụrụ na ị gụọla akụkọ anyị na sistemụ bọọlụ bọọlụ na ịgba bọl bọọlụ ị ga-aghọta ihe kpatara anyị ji atụ aro ịkụ nzọ na Turkey.
Anyị na-adụ ndị na-agba ume ka ha chọọ egwuregwu ebe otu egwuregwu abụọ nwere opekata mpe 2.0 ma ọ bụ karịa iji merie na otun’ime ndị otu kachasị amasị.
Na egwuregwu dị ka nke a, anyị na-atụ aro ka ị nzọ na underdog. Ọ bụ ezie na anyị na-ebu amụma Italytali iji merie, anyị kwuru otú Turkey ga-esi dị ize ndụ na otu ha nwere ike isi jiri nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ Italy.
Anyị na-atụ aro ka ị tinye obere nzọ d e Turkey ma nwee ike zụta uru nke 7.6x ray ma e jiri un tụnyere naanị 1.6x ray ma ọ bụrụ na ị zọ ontali.
Ọ bụ t a ga-enwe nloghachi nke $76 mma karịa a 16 nzọ ma ọ bụrụ t ị na-etinye a 10 nzọ?
Anyị chọtara onye na-ede akwụkwọ nke na-enye nsogbu kachasi ike maka Turkey anyị nwere ike ịchọta. B-Bets na-enye 7.60 nsogbu maka Turkey ma e jiri ya tụnyere nsogbu kachasị elu maka Turkey dịka ndenye self service na-anọchi na 7.5.